२ वर्षअघिको रेकर्ड तोड्दै सुन तोलाको ५६ हजार ! Bizshala -
२ वर्षअघिको रेकर्ड तोड्दै सुन तोलाको ५६ हजार !
काठमाण्डौ । पहेँलो धातु सुनको भाउले २०७० चैतमा कायम भएको उच्च बिन्दूलाई समेत पार गर्दै बुधबार नयाँ किर्तिमान बनाएको छ ।
तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेर बुधबार सुनको भाउ ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ ५५ हजार ७ सय पुगेको थियो । २०७० चैतमा सुनको भाउ प्रति तोला ५५ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसदेखि हालसम्म सुनको भाउ ५५ हजार ८ सय नाघेको थिएन । २ वर्षअघि कायम भएको उच्च विन्दू समेत पार गरी सुनको भाउले नयाँ किर्तिमान बनाएसँगै सुन सञ्चित गर्नेहरु मालामाल भएका छन् ।
अघिल्लो साता केही घटबढ भएको सुनको भाउ यो साताको आइतबार र सोमबार प्रति तोला ५५ हजारमा अडिएको थियो । त्यसपछि चाहि सुनको भाउ बढ्न थालेको हो । दुई साताअघि पनि एक्कासी बढ्न थालेको सुनको भाउ अघिल्लो साताको केही दिन केही घटेर फेरि उकालो लाग्ने क्रम सुरु भएको थियो । साताको पहिलो २ दिन स्थिर रहेको सुन मंगलबारदेखि बढ्न थालेको र यो क्रम केही दिनसम्म रहनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
२०७० चैतमा सुनको भाउ प्रति तोला ५५ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसदेखि हालसम्म सुनको भाउ ५५ हजार ८ सय नाघेको थिएन ।
भाउ लगातार उकालो लागेपछि २ महिनाको अवधिमा सुन प्रति तोलामा ९ हजार रुपैयाँ महंगो भइसकेको छ । पछिल्लो तीन सातामा मात्र सुन प्रति तोला ५ हजार रुपैयाँ बढेको छ ।
कात्तिकको पहिलो साता सुनको भाउ प्रति तोला ४७ हजार रुपियाँसम्म ओर्लिएको थियो । त्यसपछि उकालो लाग्न थालेको भाउ माघ लागेपछि ६ हजार रुपैयाँ महंगो भइसकेको छ ।
सुनको भाउ बढे पनि चाँदीको भाउ चाहि मंगलबार झै बुधबार समेत स्थिर रह्यो । मंगलबार चाँदी तोलाको ७ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।